Tetikasa DIY hamerenana amin'ny laoniny mpamaky CD / DVD - Ikkaro
firosoana >> Fanodinana vilany elektronika sy mekanika >> Tetikasa DIY hamerenana amin'ny laoniny mpamaky CD / DVD
Tetikasa DIY hamerenana amin'ny laoniny mpamaky CD / DVD
Ankehitriny dia mahazatra ny ao an-trano mpilalao CD taloha na DVD izay tsy ampiasainay intsony ary tena tsara loharanom-pahalalana ho an'ny tetikasanay DIY.
Handeha disassemble mpamaky CD aho hijerena ireo sanganasa azontsika araraotina ary avelako ny lisitry ny tetikasa mahaliana (mpampianatra) izay azo atao amin'ny tsirairay amin'ireo sanganasa. Ny rohy dia tetikasa amin'ny teny Anglisy, saingy hiezaka tsikelikely hamerina azy ireo aho ary hamela ny antontan-taratasy rehetra amin'ny Espaniôla.
Efa antitra io modely io. Heveriko fa mbola mandeha io, nefa satria manana 3 na 4 hafa aho dia natao sorona ho an'ny lahatsoratra :)
Mialà, avereno ampiasaina ary avereno ampiasaina ny mpamaky CD / DVD
Alohan'ny hahalasa adala anao mivoaka ny zavatra rehetra nefa tsy manery, ka raha misy ampahany tsy azonao esorina dia satria tsy nesorinao daholo ny visy sy / na kiheba. Aza asiana rovitra ny ondry.
Nanomboka nanokatra azy io tamim-pitandremana izahay. Tsy misy dikany loatra ny manome anao ny torolàlana momba ny fomba hanokafana azy, satria ny maodely tsirairay dia natao tamin'ny fomba hafa. Ity dia tonga niaraka tamina tabilao kely 3, izay nifindra indray mandeha, namela ny iray amin'ireo fonosana alimina hihetsika.
Ary olana ny fotoana esory am-pitoniana ireo sombin-javatra mandra-pahatongantsika any amin'ny faritra anatiny izay ilay mahaliana.
Aza ariana ny visy fa aza ariana. Tehirizo fa afaka mampiasa indray ny zava-drehetra izahay ;-)
Eto isika dia efa mankasitraka ny laser ary ny motera tsy misy borosy izay miandraikitra ny famadihana ny CD. Manohy manala ny visy amin'ny sisiny izahay, hahafahana miditra tsara amin'ireo sombin-javatra. Raha vantany vao azontsika atao, dia hampisaraka azy amin'ny takelaka elektronika ihany koa isika.
Tsy misy na inona na inona hijerena. Hotehirizinay izao ny takelaka, Tsy namela rohy aho hampiasana azy io indray. Amin'izao fotoana izao dia tsy tonga ao an-tsaiko fotsiny ny manala ireo singa hampiasana azy ireo indray, na dia eo aza izany rehetra izany ireo izay SMD avy eo tena sarotra hararaotina. Tiako ireo tongotra kely matavy mandritra ny androm-piainany.
Esory ny disassemble anao ary efa esorinay ilay ampahany mahaliana an'ny mpamaky, omeko antsipirihany bebe kokoa ilay sary
Mekanisme fanesorana CDJereo ambany ankavanana dia misy motera kely izay ho hitantsika eo amin'ny lafiny aoriana.
Motera tsy misy borosy.
Laser tamin'ny CD
Motor rafitra fametrahana laser (Namela anay eto ny tutorial, satria manantena dingana tsikelikely miaraka amin'ilay visy aho)
Raha hitantsika avy any aoriana ity
Manana ampahany vaovao isika, laharana 5, dia ny motera izay mampandeha ny rafitra fanokafan'ny CD player, 6,7 sy 8 no borosy, laser ary ny motera avy ao aoriana.
Eny, raha tianao ho mazava kokoa izany
Afaka manohy ny famongorana isika. Satria tsy miato izany, na dia afaka manao izany aza isika rovitra ny laser, ny borosy ary ny rafitra fametrahana rehetra, saingy tsy handeha lavitra aho ary hamela ireo sombin-javatra feno, izay no ilaintsika amin'ireo tetikasa natolotra
Tetikasa DIY miaraka amin'ireo ampahan'ny mpilalao CD / DVD voaverina
Ary izao no nandrasanao, ireo Tetikasa DIY hatao amin'ireo ampahan'ny mpamaky. Eny, mila tetikasa fanampiny ny tetikasa sasany, tsy amin'ny mpamaky ihany io, ohatra, mora aminao ny mila azy tabilao Arduino, na ny mekanisma CD / DVD 3 Ary raha hanao mpanonta kely-3D ianao dia mila extruder mazava ho azy.
Miaraka amin'ny mekanisma
Ok, nandany ny fanaparitahana aho ary manana ny olana izahay fa tsy misy tsikelikely, fa jereo izay azonao atao amin'ireo sombintsombiny sy firafitra ireo.
Printer 3D Mahantra Lehilahy
Mpanamboatra laser amin'ny paosy
Printer avy amin'ny mpamaky CD
Miaraka amin'ny motera Brushles
Raha miasa tsy misy borosy dia tsy ampy ny mampifandray azy amin'ny volt ary toy ny amin'ny maotera DC mahazatra, mila mpamily sasany isika hampandeha azy tsara.
Fahita ihany koa ny fanaovana anemometra. Miala aho fa esoriko ny tsy misy borosy ary mahita zavatra mahaliana be momba an'ity karazana motera ity.
Miaraka amin'ny motera stepper
Eny, araka ny nolazaiko, nanantena aho fa hahita motera stepper toy ilay ho hitanao ao amin'ny lesona, miaraka amin'ny visy tsy misy farany, antenaiko fa hanana vintana bebe kokoa noho ianao ianao, hehe
Arduino Mini Laser Cutter
Mpamolaka penina Arduino
The MicroSlice | Mpanapaka laser kely Arduino
Miaraka amin'ny laser
Mitandrema amin'ny laser, maso sy hoditra, mety hampidi-doza tokoa izany ary miteraka fahasimbana tsy azo sitranina. Raha manana fanontaniana ianao dia aza atao ireo tetik'asa ireo.
Toro-marika laser namboarina
Module Laser natao an-trano
Ary amin'izany no amaranantsika ny mpamaky. "Mampanantena" aho fa hanao ireo tetik'asa naroso tsikelikely toy ny fanao ao Ikkaro. Fantatrao ve fa misy zavatra mahaliana kokoa?
Sokajy Fanodinana vilany elektronika sy mekanika Tags Ho Ticket navigation
Fanehoan-kevitra 13 momba ny "tetikasa DIY hamerenana famerenana CD / DVD player"
3 septambra 2014 amin'ny 5:09 alina
Atsofohy ilay lehilahy Roomba ary ajanony ny mpamaky hatramin'ny taona 90!
3 septambra 2014 amin'ny 5:13 alina
haha, omeo fotoana kely aho, haidiko ao anatin'ny andro vitsivitsy :) Andao hojerentsika raha ataoko izay hahomby sa inona. Fa manana mpilalao CD na DVD 4 na 5 aho ary tokony araraotinao ;-)
12 septambra 2014 amin'ny 4:17 alina
Efa ela aho no nanaraka ity pejy ity tsy nitonona anarana (ela ampy), tiako izany
12 septambra 2014 amin'ny 4:18 alina
Efa ela aho no nanaraka an'ity pejy ity tamin'ny anarana tsy fantatra anarana (ampy ampy), tiako ny manampy ity pejy ity amin'ny fampidirana ireo forona. Azonao omena ahy boky fampidirana DIY sy injeniera? Maitso tokoa aho amin'ity, saingy misy hevitra tsara sy te hianatra, heveriko fa mandeha lavitra! :)
28 Oktobra 2014 amin'ny 2:06 alina
tsara kokoa noho ny boky DIY na elektronika amin'ny ankapobeny, heveriko fa tokony hifantoka amin'ny tetik'asa tianao hatao ianao ary avy eo manadihady izay ilainao ary mianatra ny elektronika, mekanika, fandaharana ilainao ho azy ireo.
Hifalifaly bebe kokoa ianao ary rehefa hitanao fa manam-pahaizana ianao ;-)
Novambra 5, 2014 amin'ny 12:04 maraina
Mizaha motera tsy misy borosy avy amin'ny cd-ko ho an'ny fiaramanidina rc, ho hitako ny fandehany, holazaiko aminao avy eo.
8 Janoary 2015 amin'ny 8:47 hariva
Ary fika mahazatra fa mahagaga ny fampiasana ny solomaso. Ny habeny dia toy ny solomaso fifandraisana, ary mora ny manasaraka ... Manjary mora amin'ny vera manify na mikraoskaopy izy io raha miraikitra saika miraikitra amin'ny sary kely na fakan-tsary, toy ny webcam, na tablette na telefaona . Ampy ho an'ny bibikely, jereo izao tontolo izao kely hampiala-voly anao ...
27 martsa 2015 amin'ny 10:50 hariva
Hitako fa tena mahaliana ny lahatsoratrao.
azonao atao ny manandrana manamboatra marika laser
2 Desambra 2015 amin'ny 4:14 maraina
azafady mba tiako ianao hitantana ny motera Brushles, azafady mba hazavao amiko
10 Febroary 2016 amin'ny 7:25 hariva
Tsara ny tolakandro, efa namaky ilay lahatsoratra aho, satria nanaparitaka mpamaky maro ary te hahita an'io maodely io, ary satria malahelo ilay motera stepper misy auger mifamatotra aho dia tsy maintsy milaza aho fa ny zavatra mahazatra indrindra, hoy ireo natoroko , moa ve izany ho toy ilay hita eo amin'ny sary, raha toa ka manosika floppy drive ianao dia matetika no ahitanao azy ireo miaraka amin'ilay auger mifatotra. Manantena aho fa raha manana ambiny ianao ary mila ny motera, dia hamarininao izany, satria amin'ny ankapobeny dia miankina amin'ny zavatra niainako ny ankamaroan'ny singa mampiasa azy ireo
25 Mey 2016 amin'ny 11:07 hariva
Salama, manana fanontaniana aho, tsy dia azoko loatra ny tontolon'ny arduino, tsy dia ny momba ny mpamily, ka manontany aho ... afaka mampiasa mpamily pololu a4988 ve aho fa tsy ireo mpamily mora voatonona ao amin'ilay paositra? satria azoko ny antsasaky ny vidiny.
23 Febroary 2019 amin'ny 12:23 maraina
Liana aho ny afaka mampiasa indray ny CD-ROM mba hihainoana mozika (ary handefa ny signal video amin'ny écran aza). Nihevitra aho fa miaraka amin'ny solaitrabe Arduino, dia afaka mifehy ny fiasa aho, saingy tsy mbola nahita totorial momba an'io. Izay rehetra hitako miresaka momba ny mpamaky tsy manambina.
29 Aogositra 2019 amin'ny 2:06 maraina
Ny famoahana ny zava-drehetra dia ataon'ny olona rehetra fa ny fanaovana zavatra amin'ny sombin-javatra no fanamby
1 Mialà, avereno ampiasaina ary avereno ampiasaina ny mpamaky CD / DVD
2 Tetikasa DIY miaraka amin'ireo ampahan'ny mpilalao CD / DVD voaverina
2.1 Miaraka amin'ny mekanisma
2.2 Miaraka amin'ny motera Brushles
2.3 Miaraka amin'ny motera stepper
2.4 Miaraka amin'ny laser